Ukubuka kwe-Crusoe 1 - I-Airbnb
Ukubuka kwe-Crusoe 1
Rampanalgas, Sangre Grande, i-Trinidad ne-Tobago
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Lynette
U-Lynette Ungumbungazi ovelele
Ukubuka kuka-Crusoe kubekwe phezu kwegquma e-Rampanalgas ngasogwini olusenyakatho-mpumalanga ye-Trinidad phakathi kweSalibea ne-Toco. Ababhukudi bangajabulela amanzi avuselelayo oLwandlekazi i-Atlantic ophambana naye ngokuqondile, kuyilapho abafuna imvelo benethuba elikhethekile lokubuka izitshalo nezilwane zemvelo engangcolisiwe kanye nombono ohehayo wokuphuma kwelanga kosuku ngalunye. Izinyathelo ezingemuva kwendawo zinikeza ukufinyelela emfuleni ogijima eduze kwendawo.
Ukubuka kwe-Crusoe kunikeza amayunithi ama-2 eduze namayunithi okulala amabili. Igumbi elikhulu leyunithi ngayinye linendawo yokuhlala enezihlalo ezikhululekile kanye nosofa, indawo yokudlela enetafula lezingodo nezihlalo eziyisithupha kanye nekhishi elineziphephelo ezihlukanisa lezi zokugcina kusukela emagumbini okuhlala nawokudlela. Womabili amakhishi ahlome ngezinto zikagesi kanye nezitsha zokupheka.Igumbi elikhulu lokulala elikhulu linokufinyelela okuqondile endlini yangasese futhi lifakwe umbhede ongu-1 wendlovukazi. Elinye igumbi lokulala linemibhede elingana nezindlovukazi ezi-2. Womabili amakamelo okulala ane-air conditioning namakhabethe akhelwe ngaphakathi.
Lokhu kuthathwa njengomphakathi wasesigodini/osolwandle. Sitholakala phakathi kwamabhishi amabili adumile i-Balandra ne-Salybia- Toco.
Siyathanda ukusebenzelana nezivakashi zethu , ngakho uma sesiqinisekise ukubhukha sizotholakala emagcekeni ngesikhathi sokuhlala. Ngaleyo ndlela singathintwa mathupha noma ngocingo noma nge-imeyili. Ngale ndlela impendulo esheshayo izotholakala.
Siyathanda ukusebenzelana nezivakashi zethu , ngakho uma sesiqinisekise ukubhukha sizotholakala emagcekeni ngesikhathi sokuhlala. Ngaleyo ndlela singathintwa mathupha noma ngocingo…
ULynette Ungumbungazi ovelele